Haweeney Viagra Waxkasta oo ku saabsan jimicsiga xoojinta jilicsanaha jilicsan
Haweeney Viagra Waxkasta oo ku saabsan jimicsiga xoojinta jilicsanaha jilicsan
/blog/Flibanserin/Haweeney Viagra Waxkasta oo ku saabsan jimicsiga xoojinta jilicsanaha jilicsan
Posted on 12 / 17 / 2017 by 阿斯劳 ku qoray Flibanserin.
Guudmarka budada 1.Flibanserin 2.Waa maxay fayruserin?
3.Waa maxay budada "flibanserin"? 4.Waxay tahay haween HSDD?
5.Waa maxay daaweynta dumarka HSDD? 6.How miyuu budada dufanka Flibanserin ka shaqeeyaa?
7.Flibanserin farsamooyinka budada ee ficilka 8.Waa maxay farqiga u dhexeeya Flibanserin iyo Sildenafil / viagra?
9. Iska ilaali budada "Flibanserin"? 10.Waa maxay budada loo yaqaan 'flibanserin' loo isticmaalo?
11.Waa sidee loo isticmaalaa budada Flibanserin? 12.Waa maxay daroogooyinka kale ee saameynaya fayraska?
13.Daaweynta Flibanserin 14.Warning of Flibanserin
15.Waa maxay saameynta daaweynta ee faytawansiin? 16. Iibso Flibanserin Raw Powder
17.Waxay ku iibsan kartaa Flibanserin Raw Powder
AASraw waa soo saaraha xirfadlaha ah ee dawooyinka loo yaqaan 'sen enchancing drugs', sida tadalafil, dapoxetine, flibanserin…
Fadlan halkan guji si aad u hesho faahfaahin dheeraad ah. Nala soo xiriir
Fiidiyowga dufanka dufanka ee Flibanserin
Flibanserin Calaamadaha aasaasiga ah
Dulmarka guud ee budada Flibanserin
Budada Flibanserin, walxo cayriin ee daroogada Flibanserin, sida badanaa loo sameeyo kaniiniyada Flibanserin / kaniiniga, waa haween daroogada kor u kaca, kaas oo loo isticmaalo kordhinta rabitaanka galmada iyo hoos u dhigida dhibaatada shucuureed ee haweenka premenopausal ee qaba jahwareerka rabitaanka galmada ee hypoactive (HSDD). In kasta oo flibanserin loogu yeero "dhadigta Viagra", habka ay u shaqeyso ayaa si muuqata uga duwan tan Viagra. Viagra waxa uu ka shaqeeyaa kororka dhiigga ku dhaca xubnaha taranka, halka fayrasku uu badanaa u shaqeyn karo sida antidepressant by hagaajinta dheellitirka nuurotransmitters ee maskaxda si ay uga caawiso soo celinta rabitaanka galmada. Waxay saameyn ku yeelanaysaa dopamine, norepinephrine, iyo heerarka serotonin ee maskaxda.
Flibanserin waxay u timaadaa kiniin waxaana caadi ahaan la qaataa maalin kasta, xilliga hurdada.
Dhibaatooyinka caadiga ah ee ka yimaada flibanserin waxaa ka mid ah dawakhaad, lallabo iyo hurdo la'aan. Flibanserin waxay sidoo kale keeni kartaa suuxdin, gaar ahaan marka la isticmaalo khamriga.
Waxaad ka iibsan kartaa Flibanserin dukaanka ama iibso Flibanserin online, Suuqa, muuqaal ah ee Flibanserin waa kala duwan tahay 60-98 nadiifnimada%, markaad ka fekereyso iibinta Flibanserin budada intarnetka ah, waxa ugu muhiimsan waa in ay daryeeshaa waa daahir.
Waa Maxay Flibanserin?
Waa maxay Flibanserin? Flibanserin waa daroogada horumariyo sidii loogu daaweeyo jirro hypoactive galmada rabitaan (HSDD) ee dumarka. Dumarka HSDD waxay leeyihiin jinsi la'aan jinsi ah oo aan la sharxi karin xaalad caafimaad oo kale. HSDD waxaa sidoo kale la socda dareenka dhibta.
Mararka qaarkood, flibanserin waxaa lagu magacaabaa "haweenka Viagra," laakiin ereygan ma aha mid sax ah. Viagra waa daawo loo isticmaalo in lagu daaweeyo xinjir la'aanta erectile ee ragga iyo shaqeeyana iyada oo la hagaajiyo socodka dhiigga guska. Si kale haddii loo dhigo, badiyaa wuxuu ka shaqeeyaa xubnaha taranka. Flibanserin way ka duwan tahay maxaa yeelay waxay ka shaqeysaa maskaxda haweenka.
Maskaxda waxaa inta badan loo tixgeliyaa haweenka ka muhiimsan jinsi ahaan. Inta badan wareegga jawaab celinta galmada waxay ka timid maskaxdeeda.
Flibanserin wuxuu ka shaqeeyaa saddex kiimiko oo maskaxda ah oo muhiim ah: dopamine, norepinephrine, iyo serotonin. Kiimikooyinkaas waa kuwa neurotransmitters. Waxay mas'uul ka yihiin inay diraan calaamadaha u dhexeeya maskaxda iyo qaybaha kale ee jidhka iyada oo loo marayo nidaamka dareenka.
Dopamine iyo norepinephrine ayaa ku lug leh farxad galmo. Si kastaba ha noqotee, serotonin wuxuu ka qaybqaataa galmada la xakameyn karo waxaana laga yaabaa in uu nadiifiyo galmada. Waxaa la rumeysan yahay in haddii kiimikada kuwani waa out of dheelitirka - haddii dopamine iyo norepinephrine heer aad u hooseeya iyo / ama heerka serotonin waa mid aad u sareeya - qof dumar ah oo ay dareemaan in ka yar galmada desire.Flibanserin shaqeeya by korinta heerka dopamine iyo norepinephrine halka hoos heerarka serotonin. Sidan oo kale, kiimikooyinkaas caawinta dhiirigelinta galmada waa la kordhay oo midkastaana wuxuu yareeyaa rabitaankiisa.
Waa maxay budada "flibanserin"?
Budada cayriin ee Flibanserin, t, Bimt 17, Bimt-17-BS, Girosa; 2H-Benzimidazol-2-one, 1,3-dihydro-1- [2- [4- [3- (trifluoromethyl) fenyl] -1-piperaziny l] ethyl] -; Flibanserin; Bimt17; 3- [2- [ 4- [4- (Trifluoromethyl) phenyl] piperazin-1-yl] ethyl] -1H-benzimidazol-2-one; Filbanserin; Flibanerins; 1,3-Dihydro-1- [2- [4- [3- (trifluoromethyl) ) phenyl] -1-piperazinyl] ethyl] -2H-benzimidazol-2-one, waa maadada loo yaqaan 'Flibanserin', nooc ka mid ah budada cad ee loo yaqaan 'crystalline budada', alaabooyin badan oo alaab-qeybiyeyaal ah oo alaab-qeybiyeyaal ah ayaa badanaa iibsada nadiif ahaanta sare ee budada Flibanserin ee internetka, ka dhig dhammaan noocyada nooca ayaa dhammeeyay Flibanserin, faahfaahinta Flibanserin sida hoos ku xusan:
Nooca Molecular: C20H21F3N4O
Dhibcaha Dhibcaha: 225 ° C
Miyuu Flibanserin budada a hormone?
Miyuu Flibanserin yahay hormore? Maya, kuma jiraan estrogen ama testosterone ama hoormoon kale. Flibanserinis daawo nafsiga ah. Waa waxay si khaas ah u dhaqmaan maskaxda serotonergic ee maskaxda, waxayna leedahay saameyn aan toos ahayn dopamine iyo norepinephrine.
Serotonin-ka maskaxda ayaa guud ahaan la rumaysan yahay in ay bareegyada jinsiga ku dhejiyaan. Flibanserin ayaa laga yaabaa inay ka caawiso in ay hoos u dhigto nidaamka nidaamka bareerka serotonin, sidaa daraadeed libido waxay mar kale u socotaa.
Maxay tahay gabadhii HSDD?
HSDD, oo sidoo kale lagu magacaabo Dumarka Hypoactive Sexual Desire.Howlaha Hooyo Dumarka ah ee Hantidhowrka Jinsiga (HSDD) waxaa lagu qeexay rabitaan jinsi taas oo u horseedda cidhiidhi iyo dhibaatooyin shaqsiyadeed. HSDD waa cilladaha galmada ugu badan ee dumarka da 'kasta leh "Si kedis ah dumarka uurka ku jira kadib markay menopausal yihiin" markay yihiin 20-49 sano waxay halis weyn ugu jiraan in lagu ogaado HSDD, marka loo barbardhigo kuwa sida caadiga ah dhalmo-dayska, dhalmo-dayska ka hor , iyo qalliin kadib dhalmo-dayska da'da weyn.
waxaad heli kartaa HSDD markaad qabtid Calaamadaha iyo Calaamadaha soo socda:
Wadida jinsiga ee hooseeya
Nasiib darro feker ahaan ama feker ahaan
Murugo kufilan dar-dar galmo hoose iyo saameynta xun ee xiriirka dadka dhexdooda
HSDD waxaa sababi kara arrimo badan oo ay ku jiraan daal, la'aanta xidhiidh lala yeesho lammaanaha, isbeddellada hormoonnada ee uurka, dhalmada, ama dhalmo, xanuun, arrimaha maskaxda, iwm.
Astaamaha iyo calaamadaha Xanuunada Dumarka Hijrada ah ee Dumarka (Hypoactive Discrimination Disorder) waxaa ka mid ah jahawareer galmo iyo faanka galmada, iyo dhibaatada cilladahaas
Cilad-galinta Dhibaatada Jinsiga ee Dumarka oo ay sabab u tahay HSDD ayaa laga yaabaa inay ku lug yeeshaan qiimaynta jidheed, hormoon iyo maskaxeed
Daaweyntu badanaaba waxay ku xirantahay baahida shakhsi ahaaneed, maxaa yeelay HSDD waxay awood u yeelan kartaa waxyaabo badan oo keena waxyaabo keena
Inta badan haweenka ayaa ka faa'ideysta daaweynta sababaha asaasiga ah ee loogu talagalay Xanuunka Xanuunada Galmada ee Hypoactive
Maxay tahay daaweynta HSDD?
Mararka qaarkood oo kaliya wada hadal toos ah oo lala yeesho lammaanahaaga ayaa xallin kara HSDD-gaaga. Waxa kale oo aad dooran kartaa inaad la hadasho dhakhtarkaaga, kuwaas oo ku weydiin kara taariikhda xidhiidhkaada iyo arrimaha la xiriira maskaxda ee la xidhiidha galmadaada. Takhtarkaaga ayaa sidoo kale raadin kara xaaladaha caafimaad ee hoose. Ugu dambeyntii waxaa laga yaabaa in lagu caawiyo:
Daaweynta jinsiga ama shakhsiyaadka shakhsiga ah.
Daaweynta xaalad caafimaad oo hoose.
Hormoon daaweynta. Daaweynta dheelitirka hormoonka ee dumarka iyo kaabayaasha testosterone ee ragga qaar leh heerarka testosterone ee hooseeya waxay kordhin kartaa rabitaanka galmada.
Ku darista ama bedelida daawada. Mararka qaarkood dhibaatada HSDD waxaa lagu xallin karaa si fudud adigoo badalaya daawooyinka, daawooyinka qadiimiga ah ee maskaxda ah ee farageliya rabitaanka galmada, tusaale ahaan, mid ka mid ah daroogada cusub oo leh saameyno yar. Ku daridda daawooyinka qaarkood xaaladaha asaasiga ah - sida Levodopa oo loo isticmaalo in lagu daweeyo cudurka Parkinson - waxaa laga helay inay ka caawiso rabitaanka galmada ragga, tusaale ahaan, sii kordhinta soosaarka dopamine neurostransmitter.
Intaa waxa dheer, cilmi baarayaashu waxay baranayaan amniga iyo waxtarka badan ee xulashooyin daaweyn caafimaad ah. Kuwaas waxaa ka mid ah qalab baaritaan ah oo loogu talagalay dumarka, taas oo cadeeyeen gaar ahaan caawimaad ka dib dhalmo-joojin ama maqnaanshaha qaliinka ugxan-sido badan oo ka mid ah haweenka testosterone ayaa la soo saaray. Laba daaweeye (antidepressants), flibanserin iyo bupropion, ayaa ka mid ah daawooyinka lagu daaweynayo haweenka ka horreeya menopausal.
Sidee buu u shaqeeyaa budada dufanka 'flivanserin'?
Flibanserin waa dawo afka laga qaato oo loo isticmaalo daaweynta rabitaanka galmada ee haweenka, si loogu daaweeyo jahwareerka rabitaanka galmada ee hypoactive (HSDD) ee haweenka.Flibanserin waxay ku shaqeysaa iyadoo sare u qaadeysa heerarka dopamine iyo norepinephrine iyadoo hoos u dhigeysa heerarka serotonin. Sidan oo kale, kiimikooyinka gacan ka geysta dhiirrigelinta rabitaanka galmada ayaa la kordhiyaa mid ka mid ah oo xakamayn kara rabitaanka ayaa hoos u dhacaya. Flibanserin wuxuu saameeyaa habka maskaxdu u shaqeyso iyadoo faragalin ku sameyneysa wada xiriirka ka dhexeeya neerfaha maskaxda ee aagaga maskaxda ee xukuma rabitaanka galmada iyo dareenka kale ee lagu farxo. Neerfaha waxay la xiriiraan midba midka kale iyagoo sameeya oo sii daaya kiimiko loo yaqaan neurotransmitters. Dareemayaasha neerfaha waxay u safraan neerfaha kale ee u dhow halkaas oo ay ku xiraan qabtayaasha dareemayaasha. Ku xirnaanta neurotransmitters ama waxay kicisaa ama joojisaa shaqada neerfaha u dhow. Flibanserin wuxuu xannibayaa dhowr ka mid ah kuwa wax qabta ee dareemayaasha dareema oo ay ku jiraan nooca dopamine 4, iyo nooca serotonin 2A, 2B iyo 2C. Waxay sidoo kale kicisaa nooca serotonin 1A. Sidee saameyntani u wanaajiyaan rabitaanka galmada ee haweenka lama yaqaan. Seynisyahannadu waxay u maleynayaan in flibanserin ay xakameyn karto aagagga maskaxda ee xakameynaya rabitaanka galmada ee haweenka ka horreeya dhalmada iyadoo la yareynayo xiisaha iyo rabitaanka galmada.
Waa maxay farsamooyinka budada ah ee Flibanserin ee ficilka?
Soo jeedinta Budada dufanka Farsamooyinka ficilku waxay ku lug leeyihiin xeerka dhowr kiimiko maskaxeed oo saameyn kara rabitaanka galmada, inkastoo nidaamka dhabta ah aan la garanayn. Flibanserin waa xeeldheer ka sameysan 5HT1A daacuunka iyo xeeldheer 5HT2A, sida lagu xusay waraaqaha warbixinta ee FDA, oo ficil ku sameeya habka dhexe ee neerfayaasha. Badeecadda ayaa sheegaysa in flibanserin ay xakameynayso dheellitirka dopamine iyo norepinephrine (labadaba mas'uul ka ah faraxumeynta galmada), iyadoo hoos u dhacaysa heerarka serotonin (oo ka masuul ah galmada / isdifaaca). Flibanserin ma aha daroogo hormoon ah, mana saameynayso socodka dhiigga sida fasalka daroogooyinka loo ogolaaday ragga qaba xanuunka erectile.
Waa maxay farqiga u dhexeeya Flibanserin iyo Sildenafil? (Addyi vs)
Kala duwanaanshaha muuqaalka:
Si loo kala saaro farqiga ugu caansan uguna sareeya, waxaa muhiim ah in la ogaado in Viagra, daawada ugu horreysa ee lagu daaweeyo dhibaatooyinka kacsiga ee ragga, waa midab buluug ah, halka Addyi uu casaan yahay. Sidoo kale waa sabab macquul ah oo lagu doorto Viagra tusaale ahaan tan iyo markii daawooyinka kale ee labka iyo dheddiga ay ku yimaadaan midabyo kala duwan oo laga yaabo in ay isku kalsoonaadaan oo keliya.
Waxay Daaweeyaan Noocyo Kala Qaybsan Galmo Leh:
Addy, qaybta firfircoon ee ay tahay flibanserin, waxay bartilmaameed u tahay rabitaanka galmada ee haweenka, halka Viagra (sildenafil) loogu talagalay in ay u sahlanaato ragga aan caqli-gal ahayn in ay helaan oo ay sii dhistaan.
Inkasta oo ragga qaarkiis ay sidoo kale ku dhacaan luminta libido, Viagra wax walbana way ka caawineysaa inay ku adkaato ololka rabitaanka, taas oo noqon karta dhibaato maskaxiyan ah ama asal ah oo ka soo jeeda nafsaani iyo nafsaani. Talo-siinta, daawooyinka niyad-jabka, iyo dawooyinka si loo kordhiyo heerarka testosterone-ga ee dadka ayaa laga yaabaa inay ka caawiyaan ka-hortagga dhibaatooyinkaas, laakiin Viagra iyo daroogooyinka kale ee ragga ah waxay wax ka qaban doonaan wax ka qabashada.
Siyaabaha ay u shaqeeyaan way ka duwan yihiin:
Viagra wuxuu ahaa kii ugu horreeyay ee loogu yeero PDE5 inhibitorsada, waa dawo loo isticmaalo daaweynta qaloocnaanta erectile ee ragga iyo shaqadeeda iyada oo la hagaajiyo socodka dhiigga ee guska. Si kale haddii loo dhigo, badiyaa wuxuu ka shaqeeyaa xubnaha taranka. Flibanserin way ka duwan tahay maxaa yeelay waxay ka shaqeysaa maskaxda haweenka.
Maskaxiyan waxaa badanaa loo tixgeliyaa xubinta taranka dumarka. Inta badan wareegga jawaab celinta galmada waxay ka timaadaa maskaxeedkeeda. Flibanserin waxay ka shaqaysaa saddex kiimiko oo muhiim ah oo kiimiko ah: dopamine, norepinephrine, iyo serotonin. Kiimikooyinkaas waa kuwa neurotransmitters. Waxay mas'uul ka yihiin inay diraan calaamado u dhexeeya maskaxda iyo qaybaha kale ee jidhka iyada oo loo marayo habdhiska dareenka. Flibanserin waxay ku shaqaysaa kor u kaca heerarka dopamine iyo norepinephrine halka hoos udhaca heerka serotonin. Sidan oo kale, kiimikooyin gacan ka geysanaya dhiirigelinta rabitaanka galmada ayaa kordhay oo midkastaana xakameyn kara rabitaankiisa.
Maalin kasta qaado ama u baahan tahay qaadashada:
Mid ka mid ah farqiga u dhexeeya flibanserin iyo Viagra iyo inta badan daawooyinka kale ee labka ah ee labka ah ayaa ku jira sida loo qaato. Si loo helo natiijooyin wax ku ool ah, waa in maalin walba la nadiifiyaa. Taas bedelkeeda, Viagra iyo dhammaantood hal ka mid ah kuwa ka hortagga PDE5 kale ayaa loo qaadaa astaan ​​u baahan, badanaaba 30 daqiiqo illaa saacad ka hor inta aan la filayn waxqabadyo galmo. Mid ka mid ah ka reebista daroogada labka ama dheddigga ah waa Cialis for Daily Daily, taas oo ah in la qaato maalin kasta si loogu oggolaado ragga in ay ku guuleystaan ​​kacsiga mar kasta oo baahi ama rabitaan la yimaado.
Saameynnada isbedelada kala duwan:
Dhibaatooyinka ugu badan ee laga soo sheego ka qaybgalayaasha ee daraasaadka kiliiniga ee flibanserin waa lulmo, gaar ahaan marka la isku daro isticmaalka aalkolo, suuxdin marmar ah, iyo hoos u dhaca cadaadiska dhiigga.
Viagra sidoo kale waxay keentaa dhibic ku-meel-gaar ah ee cadaadiska dhiigga, taasoo ka dhigaysa in aan la isticmaali karin daawooyinka nadaafadda ku salaysan oo sameeya wax la mid ah. Hase yeeshee, dhibaatooyinka ugu caansan ee kiniiniga buluugga ahi waa xanuun dhabarka ah, neefta, madax-xanuun, dhabar xanuun, murqo xanuun ama jilicsanaan, cirridka sanka, iyo lallabbo, kuwaas oo intooda badan lumiyo isticmaalka daroogada. Saameyno aad u daran ee Viagra waxaa ka mid ah maqnaansho lama filaan ah oo maqal ama aragga ah ama korriin soconaysa in ka badan afar saacadood.
Miyuu budada Bliviserin ammaan ah?
Is Budada dufanka ammaan ah? Waxaan sharad ku galay inay tani noqon karto su'aal dadka badankood diirada saaraan. Filibanserin waa daawada ugu horeysa ee ay ansixiso FDA "cillad rabitaanka galmada ee hypoactive," oo ah magaca sumadda Addyi, oo lagu qeexo FDA "waxaa lagu gartaa rabitaan jinsi oo hooseeya oo sababa dhibaato calaamadeysan ama dhibaato shaqsiyeed mana aha sababo la xiriira xaalad caafimaad ama mid maskaxeed oo wada jir ah, dhibaatooyin ka dhex jira xiriirka, ama saameynta daawada ama walax kale oo daroogo ah. ”
Shirkadda Canadian-ka ah ee Valeant oo ah $ 1 ayaa waxa ay ku saabsantahay in Addyi uu yahay nooc ka mid ah daroogada la yaabka leh - ama, ugu yaraan, in hype uu wax badan ka faa'iideysto marka loo eego haweenka. Iyo caddayntu waxay u egtahay in waxoogaa ah.
In kasta oo ay sharci tahay, ammaan tahay, oo la xakameyn karo, laakiin mararka qaarkood waxay u baahan tahay in laga taxaddaro dhibaatooyinka soo raaca.
Waa maxay budada "Flibanserin" loo isticmaalo?
Sida aynu horay u sheegnay, Flibanserin waxaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo haweenka qaba xanuunka rabitaanka galmada ee galmada (HSDD, rabitaan jinsi oo hooseeya oo sababa dhib ama dhibaatooyin qofeed) oo aan la kulmin miyir beel (isbedel nolosha, dhammaadka caadada caadada). Fayraska waa in aan loo isticmaalin daaweynta HSDD ee haweenka ku dhacay menopause ama ragga ama si loo hagaajiyo waxqabadka jinsiga. Flibanserin waxay ku jirtaa daawooyinka loo yaqaano serotonin reseptor 1A agonist / serotonin reseptor 2A antagonist. Waxay ka shaqeysaa iyada oo bedeleysa waxqabadka serotonin iyo walxaha dabiiciga ah ee maskaxda ku jira.
Sidee loo isticmaalaa budada Flibanserin?
Noocyada dufanka 'Flibanserin' caadi ahaan waxay u yimaadaan sida kiniin si uu afka u qaato. Waxaa badanaa la qaataa hal mar maalin kasta waqtiga hurdada. Qaado laf-dhabarka wakhtiga hurdada maalin kasta. Raac tilmaamaha ku qoran calaamadda daawadaada, si taxadar leh u sheeg dhakhtarkaaga ama farmashiistaha si aad u sharaxdo qayb kasta oo aadan fahmin. Qaado nacasta sida saxda ah. Ha qaadin wax ka badan ama ka yar ama ha u qaadin inta badan dhakhtarkaaga. Haddii calaamadahaagu aysan fiicnayn ka dib marka toddobaadka toddobaad ee daweynta, wac dhakhtarkaaga.
Ka hor intaadan qaadan budada flibanserin
u sheeg dhakhtarkaaga iyo farmashiistahaaga haddii aad xasaasiyad u leedahay cagaarshowga, daawooyinka kale, ama mid kasta oo ka mid ah maaddooyinka kiniiniyada kiniiniyada ee "flibanserin". Weydii farmashiiyahaaga ama hubi Tilmaamaha Daawada ee liiska maaddooyinka.
u sheeg dhakhtarkaaga iyo farmashiistaha dawooyinka kale ee daawada laguu qoray iyo daawooyinka aan la isku qorin, fitamiinnada, nafaqada, iyo alaabta dhirta ee aad qaadato ama qorshayso inaad qaadato. U hubso inaad sheegto daawooyinka ku taxan qaybta WAXYAABAHA LOOGU TALAGALAY iyo mid kasta oo ka mid ah kuwan soo socda: antidepressants sida fluoxetine (Prozac, Sarafem); antifungals; cimetidiin (Tagamet); digoxin (Lanoxin); diphenhydramine (Benadryl); daawooyinka walaaca ama jirada maskaxda; daawooyinka loogu talagalay suuxdinta sida carbamazepin (Epitol, Tegretol, Teril, kale), phenobarbital, iyo phenytoin (Dilantin, Phenytek); dawooyinka ladagaallanka (daawooyinka) daawooyinka xanuunka; p-pillerka afka; korontada maskaxda oo ay ka mid yihiin dexlansoprazole (Dexilant), esomeprazole (Nexium, Vimovo), lansoprazole (Prevacid), omeprazole (Prilosec), pantoprazole (Protonix), ama rabeprazole (Aciphex); ranitidine (Zantac); rifabutin (Mycobutin); rifampin (Rifadin, Rimactane, Rifamate, Rifater); daaweynaha; sirolimus (Rapamune); kiniiniga hurdada; iyo qaboojiyeyaasha. Dhakhtarkaaga ayaa laga yaabaa inuu ubaahdo inuu bedelo qiyaasaha daawooyinkaaga ama uu si taxadar leh kuula socodsiiyo waxyeelada.
u sheeg dhakhtarkaaga waxa alaabta dabiiciga ah ee aad qaadato, gaar ahaan ginkgo, resveratrol, iyo St. Johns wort.
u sheeg dhakhtarkaaga haddii aad uur leedahay, qorsheyso inaad uur yeelato, ama aad naas nuujiso. Haddii aad uur leedahay intaad qaadaneysid suufin, wac dhakhtarkaaga. Ha naas nuujin markaad qaadatid qallayl.
waa inaad ogaataa in suufku uu ku yareeyo. Ha kaxeynin baabuur ama qalabka wax lagu shaqeeyo illaa ugu yaraan saacadaha 6 kadib qiyaastaada laf-dhabarta iyo ilaa aad ogtahay sida daawadani kuu saameyneyso.
Intaad qaadaneysid budada Flibanserin
Inta aad qaadatid Flibanserin, fadlan fiiri tan:
Flibanserin iyo Alcohol.Consuming aalkolo ah markaad qaadato faytawansiin waxay sababi kartaa dareen-celin khatar ah .Ka fogow aalkolo inta aad qaadanaysid dawadan.
Flibanserin iyo Grapefruit
Intaad qaadaneysid Flibanserin, ha qaadanin Canab, ama ha lahadlin dhakhtarkaaga kahor intaadan cunin canab ama miraha canabka marka aad qaadanaysid flibanserin. Miro ayaa laga yaabaa inay la falgalaan sida daroogadu uga shaqeyso jirkaaga. Flibanserin ayaa kaa dhigi karta dawakh ama daal.
Ha kaxeyn baabuur ama ha sameynin waxqabadyo u baahan feejignaan illaa aad ka ogaato sida daawadani kuu saameyneyso. Ka fogow wadista ama ku shaqeynta mashiinka ugu yaraan 6 saacadood ka dib markaad qaadato flibanserin, iyo ilaa aad ka ogaato sida daawadani kuu saameyn doonto. Dawakhaad ama cadaadis dhiig oo hooseeya ayaa sababi kara dhicitaan ama shilal kale.
Ka fogow qaadashada kaabista dhirta ay ku jiraan: ginkgo, resveratrol, ama St. John's wort.
Iska ilaali in aad si deg deg ah uga soo baxdo fadhiga ama jiifka, ama waxaad dareemi kartaa wareer. Si tartiib ah u soco oo is-xaji si aad uga hortagto dayrta.
Kadib markaad qaadatay budada Flibanserin
Kadib qaadashada Flibanserin, waxaa muhiim ah in la boodboodo sida loo keydiyo loona tuuro, haddaba aan baranno.
Daawooyinka aan loo baahneyn waa in lagu tuuraa siyaabo gaar ah si loo hubiyo in xayawaanka, carruurtu, iyo dadka kale ayan ku baabbi'in karin. Si kastaba ha ahaatee, waa inaadan daadin dawadan hoos hoosta musqusha. Taa beddelkeeda, habka ugu wanaagsan ee loo tuuri karo daawadaada waa iyada oo loo marayo barnaamij daawo qaadasho ah. Kala hadal farmashiistahaaga ama la xiriir qaybta qashinka / dib-u-warshadaynta deegaankaaga si aad u baratid barnaamijyada dib-u-qabashada bulshadaada.
Maxay yihiin daroogooyinka kale ee waxyeelleynaya fayraska?
Qaadashada dawadan oo leh daroogo kale oo kugu dhejiya ama aad hoos u dhigto cadaadiska dhiiggaaga ayaa ka sii dari kara saameyntaas. Weydii dhakhtarkaaga intaadan qaadan flibanserin kiniiniga hurdada, daawada xanuunka narkotikada, murqaha musqusha, ama daawada walwalka, niyad-jabka, ama suuxdinta.
U sheeg dhakhtarkaaga dhammaan daawooyinkaaga hadda iyo wixii aad bilowdo ama joojiso isticmaalka, gaar ahaan:
Liiskani ma dhammeystirayo. Daawooyinka kale waxay la macaamilaan laf-dhabarka, oo ay ku jiraan dawooyinka dhakhtarku qoro iyo kuwa la iibsado, fitamiinada, iyo alaabada dhirta. Dhammaan isdhexgalka suurtagal maaha inay ku qoran yihiin buug daaweynta.
Talo qiyaas ah Flibanserin waa 100 mg afka ah hal mar maalintii oo dhan xilliga hurdada
Muddada daaweynta: Daawadan waa in la joojiyaa ka dib marka ay toddobaadyadooda XNUM haddii bukaanku aanu soo sheegin ciladaha soo kabashada.
Faallooyinka: Daawadani looma sheegin si kor loogu qaado waxqabadka galmada, loomana tilmaamayo daaweynta haweenka postmenopausal ama ragga.
Isticmaalidda: Daaweynta haweenka premenopausal ee leh hanti, isku-darka guud ee isku-darka jinsiga (HSDD) sida lagu garto rabitaan jinsi oo hooseeya taas oo keenta calaamad muujinaysa dhib ama ciriiri ku timaaddo mana aha sabab caafimaad ama mid nafsiyan ah, dhibaatooyinka ku jira xiriirka, ama saamaynta dawada ama walxaha kale ee daroogada.
Haddii bilowdid Daroogada ka dib Isticmaalka Xudunta ama CYP450 3A4 Inhibitor:
-Ku bilow daawooyinkaan 2 ka dib qiyaasta ugu dambeysa ee CYP450 3A4 inhibitor ah.
Haddii aad bilowdo guddi ku-meel-gaadh ah ama xoog leh CYP450 3A4 Inhibitor ka dib Isticmaalka Daawooyinkaan:
-Ku darso CYP450 3A4 xannibaadaha 2 ka dib qiyaasta ugu dambeeysay ee daroogadan.
Haddii aad ka shakisan tahay xaddi badan, la xiriir xarunta xakamaynta sunta ama qolka gurmadka deg deg ah. Waxaad la xiriiri kartaa xarunta xakamaynta sunta ee 800-222-1222.
Qaadashada Qaadashada Flibanserin
Haddii aad ka maqnayd qiyaasta tallaalka qallalan, qaado qiyaasta xigta wakhtiga hurdada maalinta xigta.
Ha ku labanlaabin qaadashada ama ha qaadan daawo dheeri ah si aad uhesho qiyaasta la seegay.
Xakamaynta Maamulka Ciyp3A4 dhexdhexaad ah ama xoog leh ayaa kordha flibanserin xaddiga, taas oo keeni karta hypotension iyo syncope
Sidaa daraadeed, isticmaalka naadirka CYP3A4 dhexdhexaad ah ama xooggan ayaa ka hortagaya
Ku xiran bukaanada qaba naafanimada beerka
Isku-xirnaanta loo isticmaalo heer kasta oo ka mid ah cilladda beerka
Soo-saarka fayruuska ayaa kordhiyay 4.5-laab ee bukaanka qaba cilladda beerka, marka la barbardhigo kuwa leh shaqeyn joogta ah oo caadi ah, sii kordhaya khatarta hypotension, syncope, iyo CNS niyad jabka
Waa Maxay Saameynaha Sidee Looga Yiraa Flibanserin?
Saameynada Cadaadiska ee Cudurka Dabaysha
U sheeg dhakhtarkaaga haddii mid ka mid ah waxyeelooyinka soo socda ay noqdaan kuwo daran ama aanad tagin:
Saameynada Cadaadiska Daran ee Flibanserin
U sheeg dhakhtarkaaga isla markiiba haddii aad la kulanto mid ka mid ah dhibaatooyinka soo socda:
Suuxdin ama miyir beelid
Dawakhaad daran ama hurdo la'aan
Calaamadaha cadaadis dhiig oo aad u hooseeya (waxaa ku jiri kara madax-xanuun, lallabbo, maqaarka maqaarka, aragti xumo, niyad-jabka, ama madax-wareer)
Dhibaatooyinka kale iyo isdhexgalka mukhadaraadka ee laf-dhabarka waa in si fiican loo fahmo bixiyaha iyo bukaanka labadaba. Addyi wuxuu ka hortagaa isticmaalka aalkolada, bukaanka qaba cilad beerka, iyo bukaanada qaata celiyeyaasha CYP3A4 dhexdhexaad ah. Addyi waxaa lagu ansixiyey qiimeyn halis ah iyo istiraatiijiyad yareyneed (REMS), oo ay ku jiraan waxyaabo lagu hubiyo isticmaalka amniga (ETASU), iyo sidoo kale Digniinta Madowga ee Black. Macluumaadka saamaynta xun ayaa muujinaya saameynta ugu caansan ee daawada ay tahay dawakhaad, lallabo iyo hurdo la'aan. Halista suuxitaanka, gaar ahaan marka la isku daro khamriga, waa walaac weyn. Iyadoo loo eegayo isdhexgalka this Addyi waxaa kaliya oo laga heli karaa xirfadlayaasha daryeelka caafimaad ee la aqoonsan yahay iyo farmashiyeyaasha la aqoonsan yahay. Xirfadlayaasha daryeelka caafimaadku waa inay qiimeeyaan suurtogalnimada in bukaanku uu ka aamusmo khamriga inta aanu qorin Addyi iyo farmasiyayaashu waa inay ka wada hadlaan isdhexgalka. Halista suuxitaanka ayaa sidoo kale kordhay sababtoo ah isdhexgalka daroogada ee leh daawooyinka CYP3A4 ee dhexdhexaad ah ama xooggan kuwaas oo farageliya burburinta Addyi ee jirka. FDA waxay u baahan tahay soo saaraha in ay sameeyaan daraasado dheeraad ah oo suuq-geyn ah si ay si fiican u qeexaan wada-xaajoodka u dhexeeya flibanserin iyo khamriga.
Soo iibso Flibanserin Powder Pow
Suuqa, waxaa jira noocyo kala duwan oo nadiif ah Budada dufanka, badanaa waxay udhaxaysaa 60% -99%, budada Flibanserin oo leh daahirsanaan sare sida 99% badanaa waxay kujiraan Fasalka Daawada, taas oo amaankeedu badanyahay in la isticmaalo, waxyeelo yar, waxay soo saari kartaa daroogo badan oo Flibanserin ah.Sidoo kale waxaad ka fiirsan kartaa waxyaabo badan sida saamiga gudbinta, habka dhoofinta, haddii alaab-qeybiyaha la isku halleyn karo, waa maxay adeegga… AAS ayaa kuu xallin doona intaas oo dhan adiga.
9 jecel yahay
Budada turinabol ee afka: Ma ogtahay xaqiiqda ku saabsan budada steroid?	Budada Lorcaserin: Wax walba oo ku saabsan daroogada lumida